Akụkọ - 2020.7.9
1. Banyere ụlọ ọrụ anyị
Anyị na-ewere "emebe maka ejiji, na-ahazi maka sexy" dị ka ebumnuche azụmaahịa, iji mee ka ejiji mara mma wee hapụ ọkwa ahụ ka ọ daa.
Isi mmalite emeputa Isi mmalite
Ulo oru na mmekorita ahia B2B
Ndị nrụpụta siri ike, nkwado zuru ụwa ọnụ
Mbupu nke ókè-ala, mbupu ụwa (FedEx DHL UPS TNT ARAMEX)
Kọmputa efere Ndinam, mbụ imewe,
Kọmputa ọnwụ bed, ngwaahịa mma nnyocha na nnyefe, ahịa ọrụ center
1. Isi mmalite ihe mmepe, imepụta CAD, imepụta, ire ahịa, ụlọ ọrụ na usoro mwepụta azụmaahịa, njikwa njikwa mma, iji hụ na nrụpụta ọrụ yana nnyefe nnyefe;
2. Intelligent CAD plate-making system, onye nwe onwe ya mepụtara ọgụgụ isi efere-eme usoro na 10 afọ nke customization ahụmahụ ukwuu mma na customization arụmọrụ na size ziri ezi;
3. Bido ịmekọrịta otu mpempe akwụkwọ, ọsọ nnyefe ọsọ ọsọ n'ime awa 24, enwere ike ịchekwa data ndị ahịa maka afọ 3;
4. Anyị nwere ike inye uwe ejiji pụrụ iche maka ndị ahịa buru ibu iji hụ asọmpi nke ngwaahịa;
5. Isi ngwaahịa na-onwe ha nyochara na mepụtara. Uwe ahụ dị obere, pụrụ iche na gburugburu ebe obibi.
3.our anyị pụrụ iche akwa
Spandex Latex bụ akwa ihe eji eme ihe nkiri latex, nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara nke ọma. Ọ na - eweputa teknụzụ nano.
Ọ nwere nnukwu agbanwe agbanwe na akụkụ anọ ọ bụla, ọ dịghị mfe ịgbawa, ọ naghị amịkọrọ mmiri, ma nwee ọrụ ọsụsọ nke egwuregwu na ahụike.
Mmetụta mmetụta ya dị ka nke latex. Ọ ga-emeghachi ihe silica gel ma bụrụ ihe edochi maka latex okike.
Spandex latex fabric mejupụtara: akwa mbụ bụ latex mbuaha Pu ihe nkiri, nke abụọ oyi akwa bụ ogologo kpara spandex oyi akwa, na nke atọ oyi akwa bụ a nano-adsorption oyi akwa.
Mirror spandex latex fabric fabric: akpa oyi akwa bụ latex mbuaha Pu fim, nke abụọ oyi akwa bụ a kpara kpara spandex oyi akwa, nke atọ oyi akwa bụ a nano-adsorption oyi akwa, na nke anọ oyi akwa bụ a latex mbuaha Pu fim.
4.Ihe anyị rụzuru
5. Usoro CAD
Mgbe ihe karịrị afọ iri nke ahụmahụ, anyị onwe anyị mepụtara ihe ọgụgụ isi kwalite version nke CAD efere Ndinam usoro. Ọ bụ a software maka uwe kọmputa efere Ndinam, nzuzo, na okirikiri nhọrọ ukwuu. Ọ bụ usoro CAD ọhụrụ na nke juputara na ya. Usoro a dị mma maka imepụta na nhazi nke uwe anyị pụrụ iche. Ọ na-eji ọgụgụ isi arụ ọrụ nke data ahaziri iche, data ahụ ziri ezi, nke na-enyere anyị aka ịmepụta uwe kwesịrị ekwesị maka ndị ahịa. Uwe anyị dị iche na nke nkịtị. Ọ na-achọ ndị na-emepụta pụrụ iche iji hazie, akwa omenala pụrụ iche, pụrụ iche CAD efere Ndinam na ọnwụ usoro, na ọkachamara Turners maka nhazi. Chụso izu oke bụ ebum n’obi anyị ebighi-ebi. Nnukwu akwa anyị bụ ozu ejikọtara ọnụ, enweghị nkebi. Ọ dabara nke ọma n’úkwù ma dị ezigbo mma. Onweghi ihe folda puru iche site na elu rue na ala. Nke a bụ ekele maka ngwa ọrụ anyị na ndị ọkachamara ọkachamara na ndị ọkachamara ịkwa akwa. Onwekwara onye aka gi nye ndumodu banyere uwe maka ijere gi ozi. Ọ bụrụhaala na ị jụọ mkpa gị, anyị nwere ike ịnye gị uwe ịchọrọ.
6.Otu ohuru anyi
Ka ọ dị ugbu a, n'ihi ntiwapụ nke coronaviruses ọhụrụ na China na ụwa niile, ụlọ ọrụ anyị nwere oke nchegbu banyere nke a. Dabere na ọtụtụ afọ nke ahụmịhe anyị na mmepụta nke anụ ahụ na ụdị uwe dị iche iche, anyị emepela usoro mmepụta abụọ maka uwe nchekwa na-enweghị isi na nkpuchi. Anyị na-echebe uwe ka nke disposable breathable Pee film na-abụghị kpara ọtụtụ ihe mejupụtara. Ọ bụ uwe na-echekwa ahụ zuru oke nke nwere mkpọchi ihu na mkpuchi. Ọ na-abịa n'ụdị dịgasị iche iche ma nwee ike ịbụ mmiri na-enweghị mmiri, uzuzu uzuzu, na-eguzogide ọgwụ nje. Ọ nwere ike gboo mkpa nke nchedo kwa ụbọchị. Ihe nkpuchi anyi di iche na ihe nkpuchi nwere ike wepu ya na ihe diri KN95. Ọ na-ahapụ adịghị ike nke ihe nkpuchi ọdịnala. Anyị nkpuchi imewe bụ nnọọ fashionable, na nwa na-acha ọcha gingham ihe onwunwe, dị ọcha nwa ákwà ihe onwunwe, na nwa Pu ume ume. Okwesiri iyi akwa nke nne na nna, ma ndi okenye na umuaka nwere ike iji ya. O nwere mpempe akwụkwọ na-agbanwe agbanwe nke nwere ike ihicha ma jiri ya ugboro ugboro. Ọ na-adịgide adịgide ma ọ bụghị nkwarụ, nchekwa nchekwa na gburugburu ebe obibi, dị ọcha ma dị ọcha, dị mma ma mara mma. Ọ bụrụ na-amasị gị, ị nwere ike ịzụta na weebụsaịtị anyị, ma nabata ndị ahịa ụlọ na ndị mba ọzọ ịbịa zụta ịzụrụ ihe.